Mgbanaka Nkume ndị a na-agba egwu n’etiti ebili mmiri na-ebigbọ ebighebi, ọ bụ nsonazụ nke mmụọ nsọ sitere na oke osimiri na pear na ọ bụ mgbanaka ihe atụ 3D. A haziri mgbanaka a na nchikota ọla edo na pearl mara mma nke nwere nhazi pụrụ iche iji mejuputa mmegharị nke pel n’etiti ebili mmiri na-ebigbọ nke oké osimiri. Achọpụtawo ọkpọkọ ọkpọkọ dị mma nke na-eme ka atụmatụ ahụ sie ike iji mee ka ihe nlereanya ahụ dị mma.
Fraịdee 29 Ọktoba 2021
Ugogbe Anya Ngwakọta dị elu | osisi “mara iko bulkier ma gosipụtara echiche a site na ihe mejupụtara atọ nwere atọ. Nchikota osisi ohuru na nkpu nkpu mara nma nke ozo putara na ROLF ọ bụla nke ugo ahihia bu ihe mara nma.
Ọla Ntị Na Mgbanaka
Tọọzdee 28 Ọktoba 2021
Ọla Ntị Na Mgbanaka N'ịbụ ndị sitere n'ike mmụọ nsọ nke okike pụta, Nchịkọta Vivit na-emepụta echiche na-atọ ụtọ ma na-achọsi ike site na usoro elongated na swirling. Mpempe vivit mejupụtara mpempe akwụkwọ ọla edo edo edo edo na-etinye nku ojii na-etinye ya na ihu mpụta. Mpempe akwụkwọ na-acha akwụkwọ ndụ gbara gburugburu earlobes nke mere na ọ bụ mmegharị ebumpụta ụwa na-emepụta egwu na-atọ ụtọ n'etiti ojii na ọla edo - na-ezo ma na-ekpughe ọla edo edo dị n'okpuru. Obi inyoghi inyoghi nke uzo na udiri erroromiki nke mkpokọta a na-egosi egwu na-adọrọ adọrọ nke ndo, onyunyo, ntughari.
Wenezdee 27 Ọktoba 2021
Ọla Ntị Na Mgbanaka Nnukwu Mouvant mkpokọta sitere na ụfọdụ akụkụ nke Futurism, dị ka echiche nke dynamism na nnweta nke ihe ịntanetị nke onye omenkà Italy bụ Umberto Boccioni gosipụtara. Mgbanaka na mgbaaka nke Mouvant mkpokọta nwere ọtụtụ iberibe ọla edo nke nha dịgasị iche iche, gbadoro ụkwụ n'ụzọ ga - eduga n'ọdịdị ngagharị ma mepụta ụdị dị iche iche, dabere na akuku a na-ahụ ya anya.
Tiuzdee 26 Ọktoba 2021
Mgbanaka Naturalwa sitere n'okike na-agagharị mgbe niile ka ọ na-edozi n'etiti nhazi na ọgba aghara. Emere ezigbo njiri site na otu esemokwu ahụ. Omume ya nke ike, mma na ike ya sitere na ikike onye okike nwere ghere oghe na mmegide ndi a n’oge okike. Ihe emechara bu nchikota nke onu ogugu a na-eme. Echiche niile na mmetụta ọ bụla agaghị arụpụta ọrụ siri ike ma na-ajụ oyi, mana mmetụta niile na enweghị nchịkwa na-arụpụta ọrụ na-anaghị ekwupụta onwe ya. Njikọ nke abụọ ahụ ga-abụ ngosipụta nke agba nke ndụ n'onwe ya.
Mọnde 25 Ọktoba 2021
NISSAN Calendar 2013 Kalenda Mọnde 29 Novemba
GlassOn "lọ Mbọsị Ụka 28 Novemba
Tango Pouch Akpa Aka, Akpa Mgbede Satọdee 27 Novemba
Mgbanaka Ugogbe Anya Ọla Ntị Na Mgbanaka Ọla Ntị Na Mgbanaka Mgbanaka Akwa